Iningi Hamba Friendly Amadolobha EYurophu Futhi How To Get Kukhona | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Iningi Hamba Friendly Amadolobha EYurophu Futhi How To Get Kukhona
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/12/2019)
Uma eside ukubona ezinye yaseYurophu Kumelwe-uvakashele izindawo, ezimbalwa ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu friendly ngokuqinisekile liyokwenza ohlwini lwakho. Lezi imizi mikhulu ukuhlola ngesithuthuthu, abenze ekahle ukuhamba ngebhajethi. Futhi ungathola khona ngesitimela. Nazi ibhayisikili imizi eyishumi kakhulu friendly eYurophu:
1. Hamba-Friendly Amsterdam, Netherlands
Amsterdam ibilokhu phakathi ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu friendly eYurophu. It unihlukanisile umjikelezo amathrekhi esikhundleni imizila, ukuvumela ukuba uhambe yonke indawo imoto-free. Ungakwazi kalula ukufinyelela ngokuhlela isitimela esuka Paris, Brussels, Copenhagen nezinye izindawo eziyinhloko zaseYurophu.
2. Hamba-Friendly Copenhagen, Denmark
Copenhagen etshaliwe phezu € 134 million isungula ngebhayisikili inethiwekhi eminyakeni. Lokho kwaba nomthelela ekwenzeni umjikelezo yabo indlela inethiwekhi umxhwele futhi umkhankaso Copenhagen ukuba phakathi aluhlaza izindawo European.
3. Hamba-Friendly Berlin, Germany
Berlin uye basebenzile ukuba abe omunye ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu friendly eYurophu isikhashana. Ekugcineni-ke, sibonga umkhankaso yokubukisa omphakathi ngebhayisikili. Njengomunye Izikhumulo European isitimela traffic, Berlin kuyinto ehluke kube lula ukufinyelela kuzo.
Amadolobha ku Netherlands abathanda ngamabhayisikili. Utrecht itshala imali eningi ku ibhayisikili layo ingqalasizinda. Long ibhayisikili ezitaladini futhi omkhulu zokupaka enza kube lula ukusebenzisa emabhayisikili khona.
Antwerp kuyinto kakhulu ibhayisikili idolobha Belgium wobungani, nge athuthukile inethiwekhi ka ngebhayisikili izindlela. Nge nemisebenzi emikhulu okuhloswe ngayo ukwenza ngcono ke okunye, Antwerp surely uhlale phakathi phezulu izindawo ngebhayisikili e-Europe.
Vienna inama ekusebenziseni Europe kuqala ibhayisikili wezimpahla uhlelo sokuqasha. Phakathi kwezinye izinhlelo ukuthi umuzi generously exhasiwe ukwenza Vienna ngaphezulu ibhayisikili-friendly is ukwakha-km 1300 umjikelezo izindlela inethiwekhi.
Basel BakaJehova abaziwa ngayo izinto ezimbalwa, nokuba ibhayisikili-friendly ungomunye wabo. Kunoma sezulu noma inkathi, ungabona izakhamuzi Basel usebenzisa ngamabhayisikili ukuzula kalula. Ungakwazi ukufinyelela Basel kusukela Amsterdam ngesitimela ngqo.
phakathi yaseJalimane ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu enobungane, Munster kugcina simo njalo okuhle. Lo muzi ubizwa lisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi lapho umgibeli ujabulile yayo ingqalasizinda ngebhayisikili nokuphepha.
Essen ukuze Munster Izitimela
Bielefeld ukuze Munster Izitimela
Cologne ukuze Munster Izitimela
Hanover ukuze Munster Izitimela
emadolobheni Italian ngokuvamile akuzona phakathi ibhayisikili lamadolobha amadala kakhulu friendly eYurophu, kodwa Verona imele kahle. Kuyinto laliwumuzi omkhulu ukuhlola ngamabhayisikili, futhi ride isitimela esuka Rome ukuze Verona kuphela ezenezela ebuhleni ka yakho uhambo.
Rimini ukuze Verona Izitimela
ERoma Verona Izitimela
Florence ukuze Verona Izitimela
Venice ukuze Verona Izitimela
Munich has a plan esicacile ukwakha enkulu ibhayisikili inethiwekhi zone kanye ngcono ingqalasizinda ngebhayisikili. Umgomo oyinhloko ukufinyelela 30% share eyisibonelo ngoba emabhayisikili. Uma ufuna ukuzama ukuthola azungeze Munich ngebhayisikili, ungase ukuhamba khona ngesitimela Berlin, Vienna, futhi Zurich, phakathi kwezinye amadolobha.
Usukulungele ukuyovakashela abanye uya khona yaseYurophu engcono usebenzisa kuphela ibhayisikili lakho nesitimela? Ulungele adventure eliyingqayizivele, futhi ukubhuka amathikithi akho isitimela ekuqaleni!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#Bike-Friendly #Amabhayisikili Bike bikefriendly europetravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi